Pedro Nwawunze: Nwokorobia maara ihe ekwe na-akụ n’ihe eserese | odumblog
Pedro Nwawunze: Nwokorobia maara ihe ekwe na-akụ n’ihe eserese
posted on Jul. 06, 2019 at 2:40 am July 6, 2019
Dịka obodo anyị na-arịa nsogbu nchekwa na ndi na-achị ehi, otu nwokorobia nọ na mpagharị ugwu, nke aha ya bụ Pedro Nwawunze na-akpa ike di egwu n’ebe ihe gbasara ihe eserese dị. O jirila aka ya kpaa mkpa mkpa n’akwụkwọ eji ese ihe nke ndi bekee na-akpọ canvas. Site n’echiche ya, o seela ọtụtụ ihe nke gbakwasiri ụkwụ n’ikpe na-ezighi ezi nakwa ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ kpọrọ aha eserese ya ‘THE ANCESTORAL‘
Pedro Nwawunze bụ nwaafọ Ikeduru nke dị n’Imo Steeti a mụrụ n’ụbọchị iri abụọ na asaa nke ọnwa Decemba, n’afọ 1988. O nwetara nzere B. A. ya na ngalaba Fine and Applied Arts n’ Institute of Management and Technology nke dị n’Enugu. Ọ bụ otu onye na ndi Society of Nigeria Artist (SNA), n’Abuja.
Ka ọ dị ugbu a, Pedro abụrụla ọkachamara n’ihe gbasara eserese nke gunyere ihe ndi a ndi bekee na-akpọ: graffiti, chalkboard art, fabric design na ndi ọzọ. Ụfọdụ ọrụ ya bụ nke gbakwasiri ụkwụ na ihe na-eme na Naijiria. O jikwa ọrụ ya ebuso arụrụ ala na ikpe na-ezighi ezi agha n’obodo a.
Ndi Igbo na-asị na onye ọrụ ọ bụla nwere ụgwọ ọrụ. Otu a ka ọ dị na ndu nwokorobia. Pedro so na mmadu iri abụọ na ise ndi ahọrọ sonyere n’emume ‘Life in my City Art Festival’ n’afọ 2016.
O sonyekwara na Abuja Unlock Exhibition emere n’afọ 2017. Ọtụtụ ọrụ bụ nke ndi mmadu zụrụ. E nwekwara ọrụ ndi o ji n’aka ugbu a.
Ile anya ebe a, ị ga-ahụ ụfọdu ọrụ aka ya ọzọ:
Tags:AncestoralArtscanvassFine artistsFine artsgraftingIgboIgbo blogIgbo NewsIgbo talentsInstitute of Management and Technology EnuguInstitute of Management and Technology Enugu best ArtistLife in my City Art FestivalLife in my City Art Festival 2016Naija got talentsNigerian potriatsNwawunzeOil PaintingPedroPedro NwawunzePotriatsSociety of Nigeria ArtistTalentsthe ancestoralthe_ancestoral
Onuorah Jennifer July 6, 2019
Download ‘The Bag’ by Phyno
Download Ruffcoin x RudeBoy – “Yati Yati”